နီဇူလိုင် | MoeMaKa Burmese News & Media
>inter-pyet is going to die!
Posts Tagged ‘ နီဇူလိုင် ’
နီဇူလိုင် ● ရုပ်ပုံလွှာမှတဆင့် ….
နီဇူလိုင် ● ရုပ်ပုံလွှာမှတဆင့် …. (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၂၆၊ ၂ဝ၁၇ လွတ်လပ်ရေးတွက်၊ တိုက်ပွဲရက်တွင် အသက်ဆုံးရ၊ သခင်ဗဟိန်း စိမ်းစိမ်းမြေ့မြေ့၊ အောက်မေ့စိတ်မှန်း တမ်းတညွတ်ညွတ်၊ လွမ်းဆွတ်ဆွတ်မိ ။ ။ (ဒဂုန်တာရာ၏...
နီဇူလိုင် ● ငါတို့သည် ကိုနေဝင်းများဖြစ်သည် (မိုးမခ) ဇန်နဝါရီ ၃၀၊ ၂၀၁၇ နိုင်ငံတော်ကို သေနတ်ကိုင်လူဆိုးတွေဝိုင်းထားတယ် လူဆိုးတွေကို ငါတို့ပြန်ဝိုင်းထားတယ် ငါတို့လက်ထဲမှာ ရရာလက်နက် အုတ်နီခဲတွေ စွဲကိုင်လျက်..။ နီဇူလိုင် ၂၉.၁.၁၇ Tags:...
နီဇူလိုင် ● မြို့ ကလေးကတဲ့ ပြဇာတ် (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၁၃၊ ၂၀၁၆ အခန်း (၁) ရီရီဝေ မြို့ကလေးမှာ နေပါတယ်.. ပေကျံစုတ်ချာနေတဲ့ တဲကလေးတလုံးမှာပေါ့..။ အခန်း (၂)...
နီဇူလိုင် – စိုးစိတ်
နီဇူလိုင် – စိုးစိတ် (မိုးမခ) မတ် ၁၊ ၂၀၁၆ အယ်နီညို တို့မြေတွေကိုကျူးကျူးကျော်ကျော် သူပိုင်မြေလို့..ဆိုင်းဘုတ်လာစိုက်တယ်..။ အယ်နီညို တို့မြေဆီသယံဇာတတွေခမ်းခြောက်.. တောတောင်တွေပျောက်အောင် သူဘယ်လို .ဘယ်အချိန်မှာ.စုပ်ယူလိုက်ပါလိမ့်..။ အယ်နီညို သူ့ကြောင့် တို့မြေမှာ တို့တွေနေစရာမရှိတော့ပဲ...
နီဇူလိုင် – မြို့ ကလေးနဲ့ တို့အရေး
နီဇူလိုင် – မြို့ ကလေးနဲ့ တို့အရေး (မိုးမခ) သြဂတ်စ် ၅၊ ၂၀၁၅ မြို့ကလေးမှာ အဲဒီနေ့က ခြိမ်း၍မရွာသောမိုး ရုံတင်နေတယ်…။ တတိုင်းပြည်လုံးက မြို့တွေလိုပဲ ပြိုတော့မယ့်မိုးတွေက ခြိမ်းလို့ ရွာစေချင်ပေမဲ့...